မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Percy Jackson: Sea of Monsters - (ဝေဖန်ရေး)
Posted by mabaydar at 10:31 PM
Thanks for the correction... I have already corrected them. I would prefer if you leave ur name for correcting me. So that I know who I should be grateful for.
9/03/2013 9:28 PM
စာရေးဆရာတွေ ဒါရိုက်တာတွေကလည်း ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ ထွင်တတ်ပါဘိနဲ့ 
9/05/2013 3:46 AM
9/08/2013 12:41 AM
စိတ်ကူးယဉ် အကောင်လဲ မဟုတ်ပါဘူး စိတ်ကူးယဉ်ဇတ်လမ်းလဲ အားလုံး နီးပါး မဟုတ်ပါဘူး. ဂရိဒဏ္ဍာရီလာ အကောင်တွေနာမည်နဲ့ တကွ ရှိပါတယ်.... :) အမြဲတန်းပရိတ်သတ် တဦး
10/25/2013 2:10 AM